Kiraro ho an'ny vehivavy | Fashion | Saripika sary maimaim-poana ho an'ny download
Nahoana no matetika no tsy mitafy ireo kiraro nividy?
Fitaratra azo amidy - na dia mitombo aza
Ny kiraro italiana dia manana fomba fanao lava
Inona no mampiavaka ny kiraro italiana amin'ny hafa?
Kiraro kiraro amin'ny jiro
Ny ankamaroan'ny vehivavy dia manana kiraro maro kokoa noho ny lehilahy, fa nahoana izy ireo no nandao ny efitranony nandritra ny fotoana lava nefa tsy nisy naratra? Ohatra, ny fanadihadiana an-tserasera iray dia nahita fa ny vehivavy dia avo roa heny noho ny kiraro marobe amin'ny lehilahy.
Ny vehivavy sy ny kiraro - iray amin'ireo piozila goavan'izao rehetra izao
Ao amin'ny efitrano fatorian'ny vehivavy, araka ny fanadihadiana ny kiraro 17, ny lehilahy dia mikasika ny mpivady 8. Nahoana anefa izy io? Izany no mahatonga ny vehivavy te handeha hiantsena? Azo antoka fa ity no antony iray mahatonga ny fahasamihafana goavana, saingy araka ny hevitry ny psychologists dia misy antony hafa miafina.
Vehivavy sy kiraro
Nahoana ny vehivavy maro no manao akanjo?
Tsy ny habetsahan'ny kiraro ho an'ny vehivavy ihany no mahamarika amin'ny fanadihadiana, fa koa ny tsy fisian'ny kiraro maro. Ny vehivavy dia te-handeha hiantsena, ary rehefa te hiova izy ireo na manana olana, dia matetika ao amin'ny toeram-pivarotana ny fitaovana voalohany.
Ny fahitan-dry zareo matetika mividy kiraro fa tsy manao azy ireo dia sarotra ho an'ny olona iray mba hahatakatra. Satria ireo saro-tahotra ireo dia ny fivarotana ary mamela ny fihetseham-pony sy ny fihetseham-pony amin'ny fotoana hafa, ohatra, mandritra ny fanatanjahantena na tavoahangy labiera rehefa mijery baolina miaraka amin'ny pals.
Amin'ny fividianana kiraro vaovao, afaka maneho ny nofiny sy ny fihetseham-pony izy ireo. Toy izany koa ny fiovana ao amin'ny volo, izay matetika ataon'ny vehivavy raha te hiova izy ireo.
Nefa maninona no tsy manao ny kirarony ny vehivavy maro? Araka ny voalazan'ny manam-pahaizana momba ny saina, ny tanjon'ny kiraro dia ny tsy hitafy azy ireo, fa ny hizara azy ireo ary hampihantona azy ireo rehefa malahelo. Ny fahatsapana ny fahatsapana ny kiraro vaovao dia tena zava-dehibe amin'ny vehivavy.
Ankoatra izany, antony iray hividianana kiraro vaovao, hanaraka ny fironana ankehitriny. Noho izany angamba ny olo-malaza amin'ny fahitalavitra mitafy kiraro avy amin'ny fanangonana vaovao fanta-daza ary ny vadinao dia maniry ny hanana izany marina izany. Etsy andanin'izany, samy hafa ny lehilahy sy ny vehivavy, satria matetika ny lehilahy dia tsy miraharaha izay mitranga amin'ny fahitalavitra ary raha misy ny fanangonana vaovao tonga amin'ny tsena.
Ny antony iray hafa amin'ny kapoakan'ny vehivavy dia ny hamaly soa ny tenany. Ohatra, raha nisy ny fandresena lehibe iray, toy ny mahomby amin'ny fanadinana fanadinana na ny fampiroboroboana.
Mety hanontany tena ny antony mahatonga azy ho kiraro fotsiny ny vehivavy mividy rehefa mila fanovana izy ireo. Izany dia tena mora mora ny manazava, satria ny kiraro dia mety foana, na dia mihamitombo ny lanjany.
Ny akanjo, jeans na tops, etsy ankilany, dia mety henjana, izay mety ho tratran'ny fahasorenana. Ankoatr'izany, tsy misy ny tena olana atahorana eo amin'ny tongotra. Ary raha tsy tsara ny toerana dia azo vidiana ny kiraro azo atao.
Nahoana no be mpitia ny pumps sy ny halavany?
Ankoatra ny kiraro maro samihafa, ny pumps sy ny halavany dia tena malaza amin'ny vehivavy. Ataon'izy ireo hojerena ny ranjony ary henjana, zava-dehibe ho an'ny vehivavy izany. Noho ny fahatsapana kely ny fahatsarana, dia toy ny hoe ahoana no ahafahan'ireo kintana eny amin'ny karipetra mena, na dia eo aza ny fandehan-dry zareo manokana.
Iray amin'ireo firenena manana tantara lava amin'ny famokarana kiraro i Italia. Amin'ny fikarakarana be, ny kiraro italiana dia novolavola tanana. Tamin'ny voalohany dia singa tokana vitsivitsy monja novokarin'ny mpanamboatra mpanamboatra Italiana tsotra.
Ny kiraro italiana dia manavaka ny hakantony
Androany, novolavolaina tamin'ny milina izy ireo noho ny antony ara-bola, fa na dia ireto palettes ireto dia mbola vita amin'ny fitiavana Italiana karazana sy ny fikarakarana ny akanjo. Ny clientele dia avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Raha tsy te-hividy kiraro mivantana any Italie ianao, dia azonao atao ihany koa ny mandidy an-tserasera na manandrana ny kiraro italiana tsara tarehy, kapa, paingotra sns. Ao amin'ny fivarotana lehibe manerantany.
Ny kiraro italiana dia efa manana kalitao tsara foana. Izy ireo dia mendrika tanteraka. Ny loko nofantenana ihany koa dia miantoka ny fiainana maharitra ela. Modely tsara tarehy tsy manam-pahataperana dia lavorary ho an'ny orinasa orinasa na hariva. Ankoatra ny kiraro dia ny fitafiana manokana avy any Italie, izay heverina ho firenena niavian'ny lamaody. Noho izany, indrindra ireo akanjo sy kiraro marika fanta-daza, toa an'i Gucci na Prada dia malaza be. Saingy koa ireo mpivady ao Salvatore Ferragamo sy Bruno Magli no mamono ny fo indrindra indrindra ny vehivavy.
Ny fomba fanoratana italiana dia azo faritana amin'ny teny vitsivitsy: avo lenta, tsara tarehy, mendri-kaja. Ny mpanjifa manerantany dia miankina amin'ny tongotra "Made in Italy". Taloha, io kiraro io dia mari-pametavahana famantarana, ankehitriny ny mpanjifa dia miandrandra ny fanaovana ny asa. Indray mandeha dia tovolahy mendri-kaja izay naneho ny harenany sy ny lazany tamin'ny kiraro italiana. Na izany aza, ireo modely ireo dia natao tamin'ny zanak'omby tsara indrindra na hoditra, izay heverina ho tena marefo, tsy sasa-poana ary mafana.
Lehilahy sy vehivavy mifandray amin'i Italia, nefa koa ny fitiavana, ny fahatsapana ary ny toetrany. Na ny mpanjifa dia mifidy kiraro sporty, baolina lavalava, akanjo ambony na hatsikana ambony, izy rehetra dia maneho ny toetran'ny Italiana karazany. Tsy nitsahatra niroborobo nandritra ny fotoana ela ny firenena. Ny rafitra famokarana manerantany dia miantoka fa ny kiraro dia azo amidy amin'ny tongotry ny mpanjifa. Amin'ny maha-fialam-boly sy amin'ny kiraro ara-barotra, ireo modely avy any Italia dia tsara toy ny any amin'ny atmosfera.
Sary fanangonan-tsosoka ho an'ny olon-dehibe - vehivavy
Sary sarimihetsika erotic mampiseho vehivavy fandriana
Sary sarimihetsika erotic mampiseho vehivavy mpivady mifankatia
Pejy fanolorana vavy
Ny sary sokitra erotic dia mampiseho vehivavy amin'ny fitiavana
Pejy fanolorana vonjimaika vehivavy